" Trump Maskax Ahaan Uma Fiyooba.." Afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka
Friday May 24, 2019 - 14:31:28 in Wararka by saleban Cilmi
Haweeneyda ugu sareysa dimuquraadiga ayaa qoyska Trump iyo kaaliyayaashiisa ka codsatay inay soo farageliyaan arrimaha madaxweynaha "iyagoo u daneynaya dalka”.
Donald Trump ayaa ka soo jawaabay, wuxuuna yiri Mrs Pelosi way "waalan tahay”, Haddana markale ayuu haweeneydan laga soo doortay California in ay tahay "qof aan nidaamsanayn”.
Iyadoo jawaab ka bixineysay arrintaas Khamiistii, Pelosi waxay sheegtay inay aad uga walwalsan tahay caafimaadka madaxweynaha iyo "guud ahaan wanaagga dalka Mareykanka”.
Afhayeenka ayaa Mr Trump ku eedeysay in uu qabo "inuu xanaaqa ka tambadiyo”.
"”Waan u duceynayaa Mareykanka,” ayay tiri Pelosi. "Waxaan filayaa in qoyskiisa iyo maamulkiisa ama shaqaalihiisa ay arrintan soo faragelin doonaan iyagoo dalka u daneynaya.”
"Waxaa suuragal ah inuu u baahan yahay fasax uu ku soo nasto,” ayay hadalkeeda ku sii dartay.
Waxay sidoo kale ku kaftantay wax ka bedelka dastuurka ee 25-aad, kaas oo ogol in madaxweynaha xilka laga qaado. Markii weriye uu sidaas u sheegay ayay ku tiri "waa fikrad fiican.”
Mrs Pelosi ayaa hab dhaqanka Trump ku tilmaamtay "shakilow”, iyadoo muujineysay sida uu ugu dheggan yahay faylashada maxkamadda una hortaagan yahay inuu marqaati noqdo lataliyihiisii hore.
Markaa ka dib, Madaxweyne Trump ayaa sheegay, in hadalka Pelosi ee in ah in lala tacaalo xaaladdiisa, uu yahay "hadalka nacasnimada”.
"Nancy-da aan fiyoobeen,” ayuu yiri. "Waxaan kuu sheegayaa, muddo dheer ayaan daawanayay, qofkii aan ogaa ma ahan, way lunsan tahay.”
Wuxuu sidoo kale sheegay "Waxay ku baabe’eysaa indhaheena hortooda”.
Madaxweynaha wuxuu sidoo kale beeniyay in uu "qeyliyay oo uu buuqay” intuu socday kullankii Arbacada ee uu la yeeshay hoggaanka Dimuquraadiga, wuxuuna tilmaamay inuu ahaa "qof aad u deggan”.
Isla markiiba wuxuu ka soo muuqday masraxa Rose Garden, wuxuuna ku dhawaaqay inuu ka baxayo dhammaan heshiisyada wada shaqeynta uu dimuquraadiga la leeyahay illaa ay ka joojinayaan "baaritaanka ay telefoonkiisa ku hayaan”.